Travis Smith Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Travis Smith
Chishanu, April 2, 2010 Mugovera, June 27, 2015 Travis Smith
Iyo Tuitive timu ichiri kuyedza kugadzikana mushure megore rino musangano weSouth NeSouth West Interactive (SXSWi) musangano munaKurume. Isu tese takave nenguva yakanaka uye takadzidza zvakawanda nezvenharaunda yekudyidzana uye zviri kuuya zvinotevera. Paive nezvakawanda zvezvikamu zvinonakidza kubva padanho nechikwata cheGmail kuenda Kubikira maNerds, mazhinji acho anga achibuda online. Ini ndaida kugovana chimwe chezvandinoda newe.
Artist uye illustrator Nick Dewar akashaya svondo rino. Akashanda kumakambani mazhinji akasiyana kubva kuThe Atlantic Monthly kuenda kuRandom House, achipa mifananidzo inonzwisisika kumazwi anonakidza mune chinyorwa kana bhuku. Basa randinofarira Nick Dewar rinoratidzira zvese hunyanzvi hwangu nehungwaru hwega: Kureruka ndiyo kiyi yehupenyu hunobudirira. Uku ndiko kujekesa uye kugona kutaura zvekare kwenguva yakaedzwa nzira yeKISS: Kwete, kwete iyo KISS - Iyo KISS musimboti.
Chishanu, December 18, 2009 Chipiri, May 6, 2014 Travis Smith
Pane kufona kuchangobva kuitika kukambani huru yenharembozha, iyo yandisingataure (logo yavo inoita senge nyeredzi yerufu yebhuruu), ndakafadzwa nemumiriri wangu webasa revatengi? zvinotyisa, ndinoziva. Panguva yese yekufona iye akanyatso kunyora pane zvandaida, uye akataura zvinhu senge, "ichi ndicho chibvumirano chinodiwa nevazhinji vatengi vangu", uye "rega nditaure nemaneja kuti atitorere chibvumirano chiri nani", uye "ndinonzwisisa kushushikana kwako,
Iwe Hausi Wako Mushandisi
Chishanu, Mbudzi 20, 2009 Mugovera, Gunyana 7, 2013 Travis Smith
Kana iwe uri nyanzvi mune rako bhizinesi, iwe unoziva kupfuura chero munhu nezve zvaunoita uye nezve ruzivo rwechigadzirwa chako. Chigadzirwa chako, nenzira, chinogona kuve sevhisi, webhusaiti, kana yakanaka inooneka. Chero chii chinoumba chigadzirwa chako, unogona kuona hunyanzvi hwako neunyanzvi mune ese chikamu chayo. Dambudziko ndere? vatengi vako havagone. Vatengi vanofanirwa kupedzisa basa nechako chigadzirwa kuti ivo